Invt Fekitori, Vatengesi - China Vakaki Vagadziri
MG 0.75-3KW CHIMWE CHIMWE CHIKAMU
INVT iMars MG akateedzana ezuva inverters akagadzirirwa pekugara. Diki saizi, kurema uremu, nyore kuisa nekuchengetedza, uye inodhura kwazvo.
BG 40-70KW CHITATU CHITATU
INVT iMars BG40-70kW pa-grid zuva inverter iri kugadzirira vashandisi vekutengesa uye inogovera pasi masitepisi emagetsi. Inobatanidza yepamusoro T matatu-chikamu topology uye SVPWM (space vector pulse wide modulation). Iyo ine yakakwira simba kuwanda, modular dhizaini, yakapusa kuisirwa uye kugadzirisa, uye kudhura-kudhura kuita.
BN 1-2KW KUSVIRA-GRID INVERTER
Iyo iMars BN yakateedzana-chimwe chikamu photovoltaic kure net inverter inotora yechinyakare off-line magetsi emagetsi mashandiro pamwe neezuva simba rekugadzira kutonga, iyo inopa inochinjika uye yakachengeteka sisitimu mhinduro kune isingamise simba magetsi emhuri neindasitiri.
INVT iMars BD inoteedzana inverter chizvarwa chitsva che photovoltaicenergy zvigadzirwa zvekuchengetedza zvinoenderana nepfungwa yehungwaru nekuchengetedza mahara, iyo inosanganisa mabasa mazhinji sekuchaja, kuchengetedza simba, photovoltaic, BMS manejimendi manejimendi manejimendi uye zvichingodaro. Iyo inogona otomatiki kuona iyo offgrid / grid yekubatanidza modhi uye batanidza kune yakangwara gridhi kuti uwane yepamusoro mutoro uye mupata kudiwa.